कफी प्रेमीहरूको लागि दुःखी खबर। यो पेय को फल ग्लोबल वार्मिंग कारण हराउन सक्छन्
कफी सिमी को लापता - केही मानिसहरू थाहा समस्या छ। ग्रह मा धेरै मानिसहरूले यो पेय निर्भर छन् र पनि यस्तो मौका गायब सक्छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा सोच बिना हरेक दिन यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यद्यपि, यो एकदम वास्तविक हो। ग्लोबल वार्मिंग हाम्रो ग्रह एउटा गम्भीर खतरा छ, त्यसैले यसलाई आशावाद कायम गर्न गाह्रो छ। यो खतरा वास्तविक हो र यो एकदम स्पष्ट छ। का समस्या छ र यो समाधान गर्ने प्रयास गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कसरी ठूलो हेरौं।
कफी उत्पादन मा वार्मिंग को प्रभाव
एउटा अनपेक्षित ग्लोबल वार्मिंग को पक्ष-प्रभाव छ: यो प्रक्रिया कफी को मान्छे खोस्नु हुनेछ सम्भव छ। हाल अध्ययन ग्रह मा तापमान मा स्थिर वृद्धि जहाँ यो कफी, उदाहरणका लागि, ब्राजिल र मध्य अमेरिका, साथै भियतनाम मा बढ्छ विशाल क्षेत्र, एक धेरै गम्भीर प्रभाव हुन सक्छ कि देखाएका छन्। यो सबै अर्को तीस वर्ष मा हुन्छ, वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन्। आफ्नो अनुसन्धान परिणाम प्रकाशित एउटा तीतो पूर्वानुमान संग विस्तृत थाह प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। प्राप्त जानकारी अनुसार, कफी वृक्षारोपण को क्षेत्रहरूमा को असी प्रतिशत एक आतंकित गर्नु रकम रूपमा प्रारम्भिक 2050 रूपमा बाली लागि अनुपयुक्त हुनेछ, र तापमान हाम्रो ग्रह को सबै ट्रपिकल क्षेत्रहरु मा soaring सबै किनभने। यदि यो प्रक्रिया रोकियो छैन, कफी चाँडै अधिकांश मानिसहरू लागि उपलब्ध हुनेछ।
वैज्ञानिकहरूले सबैभन्दा निर्माताहरु द्वारा उपयुक्त छ जो मुख्यतया अरेबिक, धम्की भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यहाँ समस्या वास्तविक छ र आगामी वर्ष सबैभन्दा जोडले नै प्रकट गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। उदाहरणका लागि, भियतनाम पहिले नै कफी वृक्षारोपण को हेक्टरमा हजारौं गुमाएको छ। सबै जुन 2016 मा जनवरी देखि सुक्खा मौसममा पानी अभाव को कारण। धेरै क्षेत्रहरु मा, त्यहाँ गर्मी, पानी को कमी एक समस्या हो, र यो सबै कफी को उत्पादन मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव छ।
आपूर्ति मात्रा कमी - कफी को लापता पहिलो चिन्ह
विश्लेषकहरूले धेरै मनपर्ने पेय को एक क्रमिक लोप भविष्यवाणी। सायद, यो द्वारा कफी को बढ्दो लागत सँगसँगै हुनेछ। अनुमानित डाटा अनुसार, स्थिति गरम गरिनेछ। हरेक देश मा, मान्छे प्रेम कफी, मांग प्रस्ताव पहिले नै बाहिर phased छ हुनत, हरेक दिन बढिरहन्छ। उदाहरणका लागि, अवधिको लागि 2015 देखि 2016 को कफी बैग को कमी मा तीन र सम्पूर्ण ग्रह लागि आधा लाख अनुमानित थियो। अघिल्लो वर्ष मा कमी छ लाख गर्न पहिले नै नजिक छ। यो प्रक्रिया ब्राजिलमा गंभीर खडेरी र डलर विरुद्ध राष्ट्रिय मुद्रा को गिरावट संग coincided, र त्यो कफी मूल्यहरु को गिरावट भएको छ। तैपनि, थप र थप देशहरूमा बजार मा दबाबको पार्छन् थाल्छ कि गम्भीर घाटा सामना गर्दै हुनुहुन्छ। एक कफी उत्पादन प्रक्रिया रोकियो सकिन्थ्यो लोप गर्न पुनर्गठित गरिने आशा मात्र छ।
कसरी कफी को लापता सामना गर्न?
स्थिति पक्कै तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन्, जबकि गर्मी हुनेछ अप, त्यसैले एक पेय आनन्द। कफी घरहरू को सबै भन्दा ठूलो श्रृंखला, "Starbucks" अनुसन्धान मा समय र पैसा कफी सिमी hotter जलवायु मा बाँच्न सक्छ भनेर फेला समर्पित लगानी छ। साथै, कम्पनी ग्रीनहाउस प्रभाव को लक्षण कम गर्न, वातावरण लागि लडिरहेका छ। तर यो छैन कि मनपर्ने ताजा पेय धम्की छैन वहन गर्न सक्षम हुन पर्याप्त छ। त्यस्तै, तेल को मूल्य मा वृद्धि रूपमा गर्दा यसको स्टक को स्तर कम उठ्नेछ र कफी को मूल्य। शायद ढिलो वा चाँडो, मान्छे एक कफी पसलमा खर्च समय खुशी बारेमा भूल हुनेछ। कफी एक लक्जरी पेय, केही गर्न उपलब्ध हुन्छ।
यो पूर्वानुमान पनि गाढा छ र खतरा अतिरंजित छ भन्ने लाग्छ भने, तपाईं वास्तविकता पहिले नै अत्यन्तै निराशाजनक छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यस्तो निकारागुआ, एल साल्भाडोर, हन्डुरास, कोस्टा रिका र भियतनाम रूपमा देशहरूमा, कफी उत्पादन को मात्रा मा सजिलै देखिने कमी पहिले देखि नै छ। वैज्ञानिकहरूले को दुःखी तथ्याङ्क - छैन पहिले नै अवस्थित अवस्था भविष्य र मूल्यांकन वर्णन गर्ने प्रयास।
यो अवस्था वृक्षारोपण लागि नयाँ भूमि लागि खोज सच्याउन मदत गर्नेछ?
विश्लेषकहरूले वर्तमान समस्याको सम्भावित समाधान नयाँ वृक्षारोपण लागि भूमि पाउन सक्छ भन्ने। यो गर्न, अफ्रीका र एशिया जस्ता महादेशमा फिट। जहाँ तपाईं यसलाई सम्भव उत्पादन जारी राख्न र माग पूरा बनाउँछ जो उपयुक्त भूमि, पाउन सक्नुहुन्छ भनेर हो। उदाहरणका लागि, भियतनाम को उत्तर मा, तपाईं एक नयाँ ठाँउ, मरिरहेका वृक्षारोपण प्रतिस्थापन गर्नेछ जो पाउन सक्नुहुन्छ। यस मामला मा उत्पादन स्तर, स्थिर हुन सक्छ। केही सामान्य विकल्प पनि ल्याटिन अमेरिका विभिन्न भागहरु छन्। यो एक नयाँ ब्यालेन्स बजार मा स्थापित अघि लाग्न थियो समय, पैसा र वर्ष। यो अवस्था 2030, माग प्रस्ताव sootvetsovat हुनेछ जब राम्रो प्राप्त सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। कम से कम, निष्कर्ष विशेषज्ञहरु द्वारा गरे। कफी उत्पादक निरन्तर एक निश्चित स्तरमा आपूर्ति को स्तर राख्न प्रयास गर्नेछ भने, समस्या हल गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यस्तो ब्राजील वा भियतनाम, पनि स्थिर छैन रूपमा देशहरूमा आर्थिक अवस्था, त्यसैले बजार अझै पनि एक महत्वपूर्ण आघात आशा।
अनिश्चितता को कारण
यो कुरा बजार मानिसहरूलाई निर्धारण गरिन्छ छ, र मानिसहरूले सबै भन्दा राम्रो तरिका हो अनपेक्षित र दयनीय भविष्यवाणी गर्न प्रतिक्रिया। हो, केही मानिसहरू अरूको समस्या समाधान खोज्न रुचाउनु गर्दा, परीक्षणको लागि तयार छन्। या त बाटो, तपाईं ठूलो मात्रा उत्पादन को पुनर्गठन को एक लामो र कठिन प्रक्रिया आवश्यक छ। यो नयाँ ठाउँमा देखा पर्छ। यो रसद, कानून, naolgami मा सावधान काम आवश्यक छ। यो खातामा परिवहन र बिक्री लिएर सिर्जना गर्न र नयाँ व्यापार क्षेत्रमा स्थापित गर्न आवश्यक पनि छ। यी सबै कारक कफी को मूल्य निर्धारण लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाइएको, कहीं एल साल्भाडोर मा वृक्षारोपण र आफ्नो घर निकटतम सुपरमार्केट मा समतल गर्न हात उठाएर देखि - आवश्यक सबै अन्तर्राष्ट्रिय कफी उत्पादकहरु लागू छ।
कफी को लापता डराएका हामी के हुन गर्न सक्नुहुन्छ छैन?
तपाईं स्थिति परिवर्तन गर्न आफ्नै प्रयासमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने, पर्यावरण अभियान कायम र ग्लोबल वार्मिंग को प्रक्रिया निकै ढिला माहौल मा कार्बन डाइअक्साइड को एक न्यूनतम लागि लड्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। पहिले नै ग्रह को जलवायु न्यानो र न्यानो छ भनेर स्पष्ट। केही वर्ष पछि, यो कफी मा एक मजबूत प्रभाव हुन सक्छ। हामी कार्य वातावरण संरक्षण रुचि राख्ने मात्र कम्पनी कायम गर्न प्रयास गर्न, अब लिन आवश्यक छ। यस मामला मा, तपाईं भविष्यमा, यो कार्य गर्न कफी को मूल्य मा व्यवहार गर्नेछ सक्षम हुनेछ। तपाईं एक किफायती मूल्य मा कफी को क्षण मा भएकोमा लज्जित महसुस हुँदैन अझै पनि सम्भव जहाँ यो कि स्थिति परिवर्तन भएको छैन त कार्य राम्रो छ प्राप्त छ। कफी गएको छ भने, विश्वका धेरै मान्छे को जीवन प्रभावित, एउटा वास्तविक प्रकोप हुनेछ। मानवता बिहान एक ताजा पेय unlearn हुनेछ। के तपाईं "तलवण्डी साबो को गियाना" जस्तै संगठन, ग्रह रक्षा गर्न खोज्नुभएको गर्ने समर्थन, आफ्नो मनपर्ने कफी को स्वाद बिर्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्छन्। सक्रिय हुन! मान्छे कारबाही गर्न सुरु गर्छन् भने, कफी समस्या निकट भविष्यमा सजिलै देखिने बन्न सक्छ। हामी सबै ग्रीनहाउस प्रभाव सीमित गर्ने प्रयास भने, कफी टाढा कहिल्यै जानेछ र ग्रह क्रममा हुनेछ।
विशेषताहरु, गुण र विशेषज्ञ सल्लाह: मानव शरीर मा कफी को प्रभाव
लाभ उठाउन वा दूध संग कफी को हानि। यस संयोजन त्याग्न गर्नुपर्छ?
हरियो कफी को विशिष्ट गुण
फोटोशॉपमा झन् झोला हटाउने तरिका: शुरुवातका लागि निर्देशनहरू